Ao amin'ny Android ve ny fomba fanarenana ary inona no ilana azy? Androidsis
Inona no atao hoe mode recovery ary inona no ilana azy?
Eder Ferreño | | Fanarenana Android, Tutorials
Azo antoka izany mihoatra ny iray no nandre momba ny fomba fanarenana amin'ny Android. Ireo mpampiasa tranainy indrindra dia hahafantatra azy tsara ary mety misy ny sasany izay nampiasa azy io indraindray. Avy eo dia hanazava amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba izany isika ary koa inona no ampiasaina. Satria fotokevitra tokony ho fantatra izany.
Ary koa, zava-dehibe ny fahalalana izany misy fomba fanarenana maro samihafa ankehitriny. Ka io dia foto-kevitra iray izay tena manandanja tokoa ary azo atao amin'ny fotoana tsy maintsy hikirakirantsika azy io. Ka tsara ny fiomanantsika amin'izany.
1 Inona no fomba fanarenana amin'ny Android ary inona no ilana azy
2 Karazana maody fanarenana
2.1 Stock sy ny fanao
Inona no fomba fanarenana amin'ny Android ary inona no ilana azy
Ny fomba fanarenana dia ampahany amin'ny fahatsiarovana ny telefaona Android. Azontsika atao koa ny mamaritra azy io ho fisarahana. Toy izany koa mitahiry fandaharam-potoana fanarenana, izay solon'ny rafitra fiasa. Izy io dia programa maivana be, izay zara raha mila toerana. Boot iray hafa amin'ny rafitra fiasa izy io, ka tsy azy. Misaotra an'ity maody ity, raha sendra misy olana amin'ny telefaona dia afaka mamerina ny rafitra fiasa izahay.
Noho izany, rehefa tsy manomboka amin'ny fitaovana ny rafitra miasa (Android amin'ity tranga ity) ny vahaolana voalohany dia ny fampiasana ity fomba fanarenana ity. Satria izy io dia hanampy antsika hanana ny rafitra fandidiana hiasa ara-dalàna amin'ny telefaona. Ny fidirana amin'izany dia miankina amin'ny mpanamboatra telefaona tsirairay. Azo alefa amin'ny alàlan'ny fanalahidy fanalahidy izy, manindry bokotra maromaro amin'ny telefaona, izay miovaova arakaraka ny marika sy / na modely.
Ny mahazatra matetika dia matetika mitazona ny bokotra herin'ny telefaona sy hery miaraka amin'izay mandritra ny segondra maromaro. Fa amin'ny lahatsoratra iray hafa dia hasehonay anao tsy ho ela ity fomba fidirana amin'ny fomba ity arakaraka ny marika tsirairay, satria matetika misy ny tsy fitoviana. Ka io no hialantsika amin'ny olana mety hitranga.
Karazana maody fanarenana
Manana karazany roa isika amin'ity lafiny ity, izay toa mahazatra ny sasany aminareo. Izy ireo no tahiry sy fanarenana mahazatra, izay ny laharam-pahamehany dia mitovy, saingy misy ny mahasamihafa azy roa. Satria zara raha misy fahasamihafana ankoatran'iray izay hotononinay.
Stock sy ny fanao
Inona no mampiavaka ireo fomba fanarenana roa ireo? Ny stock dia ireo izay noforonin'ny mpanamboatra telefaona. Ka ny marika tsirairay dia mamorona ny rafi-pamerenana ny rafitra fikirakirany ary mampiditra azy ao amin'ny fahatsiarovana ilay fitaovana. Mitovy izy ireo matetika, fa mety misy tsy fitoviana eo amin'ny marika.
Matetika ny dikan-tahiry hamela antsika hamerina ny telefaona izy ireo, mahatonga ny Android hiasa indray. Ho fanampin'izany dia manome asa fanampiny fanampiny izy ireo, miankina amin'ny tian'ny mpampiasa hatao. Matetika dia azo atao ny mamafa ny angon-drakitra rehetra amin'ny telefaona, mamerina azy amin'ny toe-javatra mitovy amin'ny nandaozany ny ozinina, ho fanampin'ny fahafahany mamafa ny cache na mametraka fanavaozana.
raha mbola ny antsoina hoe fomba amam-panao dia ireo noforonin'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa. Izy ireo no matetika anovozantsika na manana safidy tsy maintsy hongotantsika. Rehefa noforonin'ireo mpampiasa izy ireo, dia mazàna dia mitondra fampiasa fanampiny izy ireo raha ampitahaintsika amin'ireo novolavolain'ireo mpanamboatra. Na dia tsy izy rehetra aza dia mifanaraka amin'ny marika rehetra, izay mametra bebe kokoa ny fisian'izy ireo na ny fampiasana azy.
Mampiavaka ity fomba ity omeo ny mpampiasa hiditra amin'ny fizarana hafa amin'ny fitaovana tsara kokoa. Manome fiasa izy ireo toy ny fahafahany mandika rakitra amin'ny fahatsiarovan-tena anaty an'ny telefaona, mamafa ny fizarazarana, manao backup amin'ny partitions, na mametraka partitions. Afaka mametraka ROM koa isika. Raha ny lojika, amin'ity lafiny ity, ny fiasa dia miankina amin'ny fanarenana mahazatra izay nofidinao, satria misy maromaro eny an-tsena, TWRP no be mpahalala indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Fanarenana Android » Inona no atao hoe mode recovery ary inona no ilana azy?
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny maody fanarenana amin'ny Android
Ny Xiaomi Mi 8 Pro dia havoaka tsy ho ela any ivelan'i Shina